Banyere US - Etourism
Tourlọ Ọrụ Njem Korea
Njem Otu Ulo
Otutu ubochi ubochi (2 ~ 5 Days)
Otutu ubochi ubochi (6 ~ 13 Days)
Ọrụ DMC & PCO
Ndị ahịa & Arụ Ọrụ
Transportgbọ ụgbọ elu
Ndị ọrụ Korea chauffeur
Ationgbọ njem Hotel + Airport
Anyị bụ alọ Ọrụ Njikwa nke na-enye njem njem niile na Korea maka ndị mba ọzọ. Ndi otu anyi sitere na ndi okacha amara nke siri ike nke mere, n’agbanyeghi akuko di nkenke, ihe omume, na ihe omume. Anyị esonyela n'ụdị njem dị iche iche na ụwa niile ma nwee mmekọrịta dị mma na ndị mmekọ obodo anyị karịa na mba 50.
Anyị na-enye ọrụ pụrụ iche na ọrụ maka ndị njem Alakụba, na-adọta na Korea ọ bụghị naanị ndị njem Middle East kamakwa ndị njem Alakụba si Eshia.
Etourism ga-aga n'ihu bụrụ ọkachamara na njem njem enyi na ọdịnihu. Anyị ga-agba mbọ niile iji weta ihe nlele Korea nke ụwa site na ịdọta ndị mba ọzọ karịa site na ọrụ ka mma.
Ichebe umu mmadu site na njem
Economic Ihe omume njegharị nwere ezigbo mma
Na-atọ ụtọ Mmemme njem na mmụọ mmpụta
Na-atọ ụtọ Mmemme njem na afọ ojuju ndị ahịa
Na-eme ọgaranya Ihe omume nlegharị anya site na nhazi nke ọma
N'IHI gịnị ka ịhọrọ nlegharị anya
1. Njikọ ụwa
Anyị enyela ọrụ njem anyị
Karịa 50 mba ofesi n’ụwa Kemgbe 2012
2. Afọ ojuju ndị ahịa
Akwụkwọ ozi sitere n'aka ezinụlọ Saudi Arabia Royal
Akwụkwọ Asambodo Nghọta
Leta si Mexico Goverment
3. Ezigbo aha ụlọ ọrụ Korea na-eme njem
Ọrụ Onyinye Ọha na Ọha
Iji meziwanye ndụ nke ndị enweghị nsogbu: Ndị ọrụ nke Etourism ewepụtala onwe ha iji mee ka ndụ ndị ọ na-enweghị ka ọ dịkwuo mma site na ibuga brikette n'ọnụ ụzọ ha n'ihu na-enwe olileanya na ha ga-enwe oge oyi.
Onyinye maka ndi nwere nkwarụ: N’ụbọchị mba ndị nwere nkwarụ, Etourism nyere ego ahụ n’ụlọ ọrụ enyemaka obodo.
Onyinye maka mmepe ndi ntorobịa: Etour na-ekwuputa mkpa mmepe ndi ntorobịa di ma nye ego na Yeongdeok County na nkwado maka mmemme.
Ikikere / asambodo
Seoul gbaara ogo njem njem
KATA Kachasị Njem Ndị njem
Akwụkwọ Asambodo Nghọta-A Ogo
Ugo iri-abuo n’afọ nke iri-n’egwu kwa afọ
Onye isi South Korea DMC 2019
Minister nke Omenala, Egwuregwu na Njem Nleta
Ghọtara dị ka Onye Ọrụ Ndị njem njem nleta
nke KATA (Korea Association of Agents)
Iwu Ọkachamara Ndị Ọrụ Njem
Ihe omuma nke ulo oru.
Onye Isi ala: Lee Hee
Adreesị: 2001, 5, Gasan dijitalụ 1-ro, 2001, Geumcheon-gu, Seoul
Copyright Copyright 2018 Etourism. Edebere ikikere nile a bụ ⠀⠀ / ⠀⠀ KTO (Korea Tourism Organisation).